Izy no manao azy - Church of God World Switzerland
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2019-01 > Nahomby izy
Mahatsapa faniriana fiadanana sy fifaliana isika ao anaty, kanefa miaina ao anatin'ny fotoana tsy fahatokisana sy hadalana. Manontany tena isika ary tototry ny fampahalalana be dia be. Ny tontolontsika izao dia lasa miha-sarotra sy misavoritaka. Iza no mbola mahalala ny hoe iza na iza no hinoanao? Maro ny mpanao politika maneran-tany no mahatsapa fa tafahoatra ny fiovan'ny toetran'ny politika sy ny toe-karena. Mahatsapa ihany koa izahay fa tsy afaka mandray anjara amin'ny fanovana amin'ity fiaraha-monina mihamalalaka ity. Tsy misy fahatsapana tena filaminanana amin'izao fotoana izao. Vitsy dia vitsy ny olona matoky ny mpitsara. Ny fampihorohoroana, ny heloka bevava, ny fitsikilovana politika ary ny kolikoly dia mandrahona ny filaminan'ny tsirairay.
Efa zatra efa niasa hatrany izahay isaky ny 30 segondra ary lasa tsy manam-paharetana rehefa misy olona miteny roa mahery mandritra ny roa minitra. Raha tsy maniry zavatra hafa intsony isika dia manova ny asantsika, ny trano fonenana, ny fialamboly na ny vadintsika. Sarotra ny mijanona ary mankafy ny fotoana. Vetivety dia lasa sorena isika satria misy fitsaharana lalina ao anatin'ny toetrantsika. Manompo sampy amin'ny sampana fitiavan-karena isika ary manolotra ny tenantsika amin'ny "andriamanitra" izay mahatonga antsika hahatsapa fahafinaretana amin'ny fanomezana fahafaham-po ny filantsika sy ny faniriantsika. Amin'izao tontolo izao feno fifangaroana izao dia nanambara famantarana ny tenany sy fahagagana maro Andriamanitra kanefa maro tsy mino azy. Nilaza i Martin Luther indray mandeha fa ny fahatongavana ho nofo dia misy fahagagana telo: «Ny voalohany dia tonga olombelona Andriamanitra; ny faharoa izay virijiny dia niteraka ary ny fahatelo no ninoan'ny olona izany amin'ny fo manontolo ».
Nanadihady ny dokotera Lioka ka nanoratra izay reny tamin’i Maria: «Ary hoy ny anjely taminy: Aza matahotra, ry Maria, fa efa nahita fitia tamin’Andriamanitra ianao. Indro, hitoe-jaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy. Ho lehibe Izy ka hatao hoe Zanaky ny Avo Indrindra; ary ny Tompo Andriamanitra hanome Azy ny seza fiandrianan’ i Davida rainy, ary Izy hanjaka amin’ ny taranak’ i Jakoba mandrakizay, ary ny fanjakany tsy hanam-pahataperana. Ary hoy Maria tamin'ilay anjely: Ahoana no hahatongavan'izany, nefa tsy mahalala lehilahy aho? Ary ilay anjely namaly ka nanao taminy hoe: Ny Fanahy Masina ho tonga ao aminao, ary hisy herin'ny Avo Indrindra hanaloka anao; koa izay masina dia hatao hoe Zanak’Andriamanitra” (Lioka 1,30-35). Ny mpaminany Isaia dia nanambara mialoha izany (Isaia 7,14). Tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy ihany no nahatanterahan’ilay faminaniana.
Nanoratra toy izao ny apostoly Paoly momba ny fiavian’i Jesosy tao amin’ny fiangonana tany Korinto: “Fa Andriamanitra, Izay nanao hoe: Avy amin’ny maizina no hiposahan’ny mazava, no nampahazava ny fontsika, mba hisian’ny fahazavana amin’ny alalantsika ho amin’ny fahalalana ny voninahitry ny Tompo. Andriamanitra ao aminy ny Endrik’i Jesosy Kristy »(2. Korintiana 4,6). Andeha hodinihintsika izay nosoratan’i Isaia mpaminany ho antsika ao amin’ny Testamenta Taloha momba ny toetran’i Kristy, ilay “voahosotra” (grika: Mesia):
« Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia eo an-tsorony; ary izany dia antsoina hoe Filankevitry ny Fahagagana, Andriamanitra-Mahery fo, Ray Mandrakizay, Andrianan’ny Fiadanana; mba ho lehibe ny fanjakany, ary tsy hitsahatra ny fiadanana eo amin’ny seza fiandrianan’i Davida sy ny fanjakany, mba hampaherezany sy hanohanany azy amin’ny rariny sy ny hitsiny hatramin’izao ka ho mandrakizay. Ho toy izany ny zotom-pon’i Jehovah, Tompon’ny maro.” (Isaia 9,5- iray).
“Mpanolotsaina fahagagana” ara-bakiteny izy. Manome fampiononana sy hery ho antsika mandrakizay sy mandrakizay Izy. “Fahagagana” mihitsy ny Mesia. Ny zavatra nataon’Andriamanitra no tiana holazaina amin’ilay teny, fa tsy izay nataon’olombelona. Izy no Andriamanitra. Fahagagana ity zaza teraka ho antsika ity. Manjaka amin’ny fahendrena tsy mety diso izy. Tsy mila mpanolotsaina na kabinetra izy; mpanolo-tsaina ny tenany. Mila fahendrena ve isika amin’izao fotoan-tsarotra izao? Ity ny consultant mendrika ny anarana. Tsy mahazo burnout izy. Miasa foana izy. Izy no fahendrena tsy manam-petra. Mendrika ny tsy hivadika izy satria mihoatra ny fetran’ny olombelona ny toroheviny. Manasa izay rehetra mila mpanolo-tsaina mahafinaritra hanatona azy i Jesosy. “Mankanesa atỳ amiko, ianareo rehetra izay mavesatra entana sy mavesatra entana; Te hamelombelona anao aho. Ento ny ziogako ka mianara amiko; fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa malefaka ny ziogako ary maivana ny entako” (Mat 11,28- iray).
Izy no Andriamanitra Tsitoha. Izy no "andriamanitra mahery fo" ara-bakiteny. Ny Mesia dia ilay Andriamanitra mahery, velona, ​​marina, misy hatraiza hatraiza ary mahalala ny zava-drehetra. Hoy i Jesosy: “Izaho sy ny Ray dia iray ihany.” (Jaona 10,30). Ny Mesia mihitsy no Andriamanitra ary mahavonjy izay rehetra matoky azy. Tsy latsa-danja amin’ny herin’Andriamanitra rehetra no eo am-pelatanany. Izay nokasainy hatao dia azony atao koa.
Ray mandrakizay izy. Izy dia be fitiavana, be fiahiana, be fitiavana, tsy mivadika, hendry, mpitari-dalana, mpamatsy, ary mpiaro. Ao amin’ny Salamo faha-103,13 Izao no vakintsika: “Tahaka ny fiantran’ny ray ny zanaka no fiantran’i Jehovah izay matahotra Azy”.
Ho an'ireo izay sahirana amin'ny fananana sarin-dray tsara, ity no mendrika ny anarana. Afaka manana fiarovana tanteraka isika ao anatin’ny fifandraisana akaiky amin’ny Raintsika Mandrakizay. Ny apostoly Paoly dia mananatra antsika ao amin’ny Romana amin’izao teny izao: “Fa tsy nandray ny fanahim-pahandevozana, dia ny tahotra indray hianareo, fa efa nandray ny fanahin’ny maha-zanaka, izay iantsoantsika hoe: Aba, Ray ô! Eny, ny fanahy sy ny fanahintsika dia manambara fa zanak’Andriamanitra isika. Fa raha zanaka isika, dia mpandova koa - mpandova an'Andriamanitra ary mpiara-mandova amin'i Kristy. Midika koa anefa izany fa miara-mijaly aminy isika ankehitriny; dia hanana ny voninahiny koa isika » (Romana 8,15-17 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Manapaka ny olony amin'ny fiadanana Izy. Mandrakizay ny fiadanany. Izy no endriky ny fiadanana, ka manapaka ny olony navotany toy ny andriandahy mamorona fiadanana. Tamin’ny lahateny fanaovam-beloma nataony talohan’ny nisamborana azy, dia hoy i Jesosy tamin’ny mpianany: “Omeko anareo ny fiadanako.” ( Jaona 14,27). Amin’ny alalan’ny finoana no idiran’i Jesosy ao am-pontsika ary manome antsika ny fiadanany tonga lafatra. Rehefa matoky azy tanteraka isika, dia omeny antsika izany fiadanana tsy hay lazaina izany.
Isika ve mitady olona hanaisotra ny tsy fandriam-pahalemana ary manome fahendrena ho antsika? Very fahagagana ve i Kristy? Mahatsapa ve isika fa miaina ao anatin'ny fotoanan'ny fahantrana ara-panahy? Izy no torohevitra fahagagana. Andao hodinihintsika ny teniny ary hihaino ny fahagagana amin'ny toroheviny.
Rehefa mino an'i Jesosy Kristy isika dia mino an'Andriamanitra Tsitoha. Mahatsiaro ho tsy afa-manoatra ve isika ao amin'ny tontolo tsy milamina izay mikorontana? Mitondra enta-mavesatra izay tsy zakanay irery isika? Ilay Andriamanitra Mahery Indrindra no herintsika. Tsy misy zavatra tsy azony atao. Mamonjy izay rehetra matoky azy Izy.
Raha mino an'i Jesoa Kristy isika dia manana ny rainy mandrakizay. Mahatsiaro kamboty ve isika? Mahatsiaro ho tsy afaka miaro tena ve isika? Manana olona izay tia antsika foana isika, mikarakara antsika ary miasa amin'izay tsara indrindra ho antsika. Tsy handao na tsy manadino anay mihitsy ny rainay. Manana fiarovana mandrakizay isika amin'ny alalany.
Raha matoky an'i Jesoa Kristy isika dia andrian'ny fiadanana amin'ny maha-mpanjaka antsika. Matahotra ve isika ka tsy afa-miala sasatra? Mila mpiandry amin'ny fotoan-tsarotra ve isika? Tsy misy afa-tsy afaka manome antsika fiadanana anaty sy maharitra.
Ny fiderana anie no azontsika atao amin'ny fahagagana, andrian'ny fandriam-pahalemana, dadanay mandrakizay sy mahery fo andriamanitra